Al-shabaab oo muddo saacado ah la wareegay xerada ciidanka Daynuunaay ee duuleedka Baydhabo – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo muddo saacado ah la wareegay xerada ciidanka Daynuunaay ee duuleedka Baydhabo
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa weerar aad u xoogan oo ay dagaalyahanada Al-shabaab ku qaadeen xerada ciidanka Daynuunay oo ku taalla duuleedka bari ee magaalada Baydhabo.
Dagaalkaasi oo muddo saacado ah socday ayaa la sheegayaa inuu yimid kadib markii dagaalyahanada Al-shabaab ay weerar balaaran kusoo qaadeen xerada ay ciidanka dowladda Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Daynuunay, iyadoona weerarkaasi uu ka dhashay qasaare baahsan.
Sidoo kale, dagaalyahanada Al-shabaab ayaa dagaalkaasi kadib u suurto-gashay inay gudaha u galaan deegaanka Daynuunay, iyadoo muddo saacado ah ay halkaasi is-qabsaday rasaas xoog leh oo is-dhaafsanayeen ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada Al-shabaab.
Dhinaca kale, dagaalyahanada Al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid qorsheysan islamarkaana ay kula wareegeen xerada ciidanka Daynuunay, waxayna sheegeen inay weerarkaasi ku dileen askar badan, kadibna ay isaga baxeen.
Ma jiro wax war ah oo illaa iyo haatan kasoo baxay dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ay kaga hadlayaan qasaaraha kasoo gaaray dagaalkaasi.
Sidoo kale, lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi, marka laga reebo sheegashada ay Al-shabeeb sheegteen inay dileen askar badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya.